Hir’achuu hanga Gaazexaa Bariisaafi sharafa alaa
Hir’achuu hanga Gaazexaa Bariisaafi sharafa alaa Featured
Obbo Ibraahim Sayid
Gaazexaan Bariisaa bara 1969 irraa kaasee Dhaabbata Pireesii Itoophiyaatiin qophaa’uun torbanitti al tokko guyyaa Jimaataa maxxansiifamaa jira.
Gaazexaan kun hanga har’aatti Dhaabbata Biraaninnaa Salaamitti maxxanfamaa kan jiru yoo ta’u, dheerinaafi bal’innisaa walduraa duubaan seentimeetira 42/29n bahaa tureera.
Haa ta’u malee, Ebla 5 bara 2010 irraa eegalee dheerina gaazexichaarraa seentimetirri torba hir’achuun 35/29n maxxanfamee bahaa akka jiru beekameera. Dhimmuma kanarratti kutaa dubbiin ilaaltu kaleessa dibbisneerra.
Kolleejjii Teknolojii Maxxansaa Biraaninnaa Salaamitti, Obbo Ibraahim Sayid Daariktara Tajaajila Maamiltootaa, Giraafikiifi Dizaayiniiti. Akka isaan ibsanitti, guyyaa irranatti eeramerraa kaasee Gaazexaa Bariisaa dabalatee gaazexoonni Alaalam, Sandaq, Rippoortariifi Addis Lissaan hanga waraqaa kanaan dura ittiin maxxanfamaa turanirraa hir'ateera.
Sababni kanaa ammoo rakkoo bajataa kollejjichaa osoo hintaane hanqinni sharafa alaa waan uumameefi, jedhaniiru. Kunis, gaazexootni kunneen waraqaa ‘Tapolayid’ jedhamee beekamu biyyoota Awurooppaarraa bitamee galuun maxxanfamanii kan bahan yoo ta’u, bara kana gatiinsaa dabaluusaa eeru.
Kollejjichis barana akaakuu waraqaa kanaa akkuma kanaan duraa bittaadhaan galchuuf ji’oota lamaan darban dura kan ajaje yoo ta’eyyuu sababa gatiin sharafa alaa dabaleef milkaa’uu hindandeenyee jedhu.
Kolleejjichis rakkoo uumame kana hiikuuf bajata dabalataa ramaduyyuu Baankiin Daldala Itoophiyaa sharafa jijjiiruuf humna biyyattiitii oli jechuun dhorkuusaas ibsaniiru. Kunimmoo dhimma dinagdee biyyaa waan ta’eef, hanga Baankiin Biyyaalessaa furuutti homaa gochuu akka hindande himaniiru.
Akka ibsa Obbo Ibraahimitti, akkuma hanqinni sharafa alaa humna biyyattiitii ol ta’uusaa dhagahanitti dhaabbata miidiyaalee maxxansaatiif ibsameera, wajjinis dhimmacharratti mari'atameera.
Maricharrattis filannoowwan 1fa waraqaan dur gaazexoonni kunniin ittiin maxxanfamaa turan rakkoo sharafa alaatiin bitamuu waan hindandeenyeef, waliigalteesaanii addaan kutuufi 2fan ammoo waraqaa hangisaa seentimeetira 35/29n (dheerinaafi bal’ina) qabuun itti fufiinsaan maxxansiisuu jedhan dhiyaachuusaaniis yaadachiisaniiru.
Hoggantootni ykn bakka buutotni miidaayee maxxansaas rakkoo kana hubachuurraa kan ka’e filannoo lammaffaatiin (waraqaa hangisaa hir’ateen) maxxansiisuuf waliigaluusaanii ibsaniiru. Waliigaltee isaanii kana fudhachuutiin hanga furmaatni argamutti maxxansaa jirraa jedhaniiru.
Rakkoo uumame kan furuuf kolleejjichi tattaaffii guddaa taasisaa jiraachuus himanii, kanaanis wayita ammaa sharafni alaa Baankii Daldala Itoophiyaatiin eeyyameeraa jedhu. Bara bajata haaraa irraa eegalees ni sirreeffama jechuun abdii qaban eeraniiru.
Gaazexaa Bariisaafi Alaalam waraqaa gaazexootni ‘Addis Zamaniifi 'Za Ethiopian Herald’ ittiin maxxanfamaa jiraniin akka maxxanfamaniif yoo barbaadame kan danda’amu ta’uu addeessaniiru. Kun garuu murtee Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa ta’uus himaniiru.
Torban kana/This_Week 9647
Guyyaa mara/All_Days 1819067